आराधना - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > उपासनाको
आराधना भनेको परमेश्वरको महिमाको लागि ईश्वरीय सृष्टि गरिएको प्रतिक्रिया हो। यो ईश्वरीय प्रेमबाट उत्प्रेरित हुन्छ र उहाँको सृष्टि तिर ईश्वरीय आत्म-प्रकाशबाट उत्पन्न हुन्छ। आराधना गर्ने क्रममा विश्वासीले परमेश्वर पितासँग येशू ख्रीष्ट मार्फत पवित्र आत्माको मध्यस्थतामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। आराधना भनेको यसको अर्थ यो पनि हो कि हामीले नम्र भएर र आनन्दसाथ परमेश्वरलाई सबै कुरामा प्राथमिकता दियौं। यो मनोवृत्ति र कार्यहरु मा व्यक्त गरिएको छ: प्रार्थना, प्रशंसा, उत्सव, उदारता, सक्रिय दया, पश्चात्ताप। (यूहन्ना :4,23:२:1; १ यूहन्ना :4,19: १;; फिलिप्पी २: -2,5-११; १ पत्रुस २: -11 -१०; एफिसी:: १ 1-२०; कलस्सी 2,9: १ 10-१-5,18; रोमी:: -20-११; १२.१; हिब्रू १२.२3,16; १.17.१5,8-१-11)
ईश्वरलाई आराधनाको साथ उत्तर दिनुहोस्
हामी परमेश्वरलाई आराधनाको साथ साथ जवाफ दिन्छौं किनकि उपासना भनेको परमेश्वरलाई उचित लाग्ने कुरा दिनुहुन्छ। यो हाम्रो प्रशंसनीय छ।
परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जे गर्नुहुन्छ उहाँ प्रेमले गर्नुहुन्छ। त्यो गौरवशाली छ। हामी पनि एक मानव स्तर मा प्रेम घमण्ड, हामी छैन? हामी अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो जीवन दिने व्यक्तिहरूको प्रशंसा गर्दछौं। उनीहरूसँग आफ्नो जीवन बचाउन पर्याप्त शक्ति थिएन, तर तिनीहरूले अरूलाई मद्दत गर्न सक्ने शक्ति प्रयोग गरे - यो प्रशंसनीय छ। यसको विपरित, हामी ती व्यक्तिहरूको आलोचना गर्दछौं जसले सहायता गर्ने शक्ति पाएका थिए तर सहयोग गर्न अस्वीकार गरे। दया भन्दा शक्ति प्रशंसनीय छ, र भगवान दुवै राम्रो र शक्तिशाली छ।
प्रशंसाले हामी र परमेश्वरबीचको प्रेमको बन्धनलाई गहिरो बनाउँछ। हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम कहिल्यै कम हुँदैन, तर उहाँप्रतिको हाम्रो प्रेम अक्सर कम हुँदै जान्छ। प्रशंसामा हामी उहाँप्रति हाम्रो प्रेमको सम्झना गर्दछौं र पवित्र आत्माले हामीमा जलाएको उहाँप्रति प्रेमको आगो दन्किन्छ। याद गर्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस् कि परमेश्वर कत्ति अद्भुत हुनुहुन्छ, किनकि यसले हामीलाई ख्रीष्टमा बलियो बनाउँदछ र उहाँको भलाइमा उहाँ जस्तै हुन हाम्रो उत्प्रेरणालाई बढाउँदछ, जसले हाम्रो आनन्द बढाउँदछ।
हामी भगवान को प्रशंसा को उद्देश्य को लागी बनाइएका थियौं (१ पत्रुस २:)), उहाँको महिमा र सम्मान ल्याउने, र जति धेरै भगवान संग सद्भाव मा हाम्रो खुशी हुनेछ। जीवन मात्र अधिक पूरा हुन्छ जब हामी गर्छौं कि हामी के गर्न को लागी बनाईएको हो: भगवान को सम्मान गर्नुहोस्। हामी यो पूजा मा मात्र होइन तर हाम्रो जीवन को तरीका मा गर्छौं।
जीवन को एक तरीका
पूजा जीवन को एक तरीका हो। हामी हाम्रो शरीर र दिमाग भगवान लाई बलिदान को रूप मा प्रदान गर्दछौं (रोमी १२: १-२)। हामी ईश्वरको पूजा गर्छौं जब हामी अरु संग सुसमाचार साझा गर्छौं (रोमी १५:१)। जब हामी आर्थिक बलिदान गर्छौं तब हामी भगवानको पूजा गर्छौं (फिलिप्पी ४:१)। हामी ईश्वरको पूजा गर्छौं जब हामी अरु मानिसहरुलाई मद्दत गर्दछौं (हिब्रू १३:१)। हामी व्यक्त गर्छौं कि उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, हाम्रो समय, ध्यान र वफादारीको योग्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँको महिमा र विनम्रताको प्रशंसा गर्छौं हाम्रो खातिर हामी मध्ये एक बन्न। हामी उहाँको धार्मिकता र अनुग्रहको प्रशंसा गर्दछौं। हामी उहाँलाई साँच्चैको बाटो को लागी प्रशंसा गर्दछौं।
त्यसकारण उसले हामीलाई बनायो - उहाँको महिमाको घोषणा गर्न। यो सही छ कि हामी एक जना जसले हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ मर्नुभयो र हामीलाई जीवित तुल्याउन हामीलाई अनन्त जीवन दिनको लागि फेरि बौह्री उठाउनुभयो, उहाँ जसले अझै पनि हामीलाई मद्दत गर्न काम गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रशंसा गर्दछौं। बढी समान हुन। हामी उहाँप्रति हाम्रो वफादारी र भक्तिप्रति .णी छौं, हामी उसलाई हाम्रो प्रेमको .णी छौं।
हामी भगवान को प्रशंसा गर्न को लागी बनाइयो, र हामी सधैंको लागी त्यसो गर्नेछौं। यूहन्नालाई भविष्यको दर्शन दिइएको थियो: «र स्वर्ग र पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनि र समुद्रमा र उनीहरुका सबै थोकमा रहेका हरेक प्राणीले मैले यो सुनेको छु: सिंहासनमा बस्नेलाई र उहाँलाई थुमा होस्। प्रशंसा र सम्मान र प्रशंसा र सदा र सदाको लागी हिंसा! " (प्रकाश ५:१३)। यो सही जवाफ हो: सम्मान को योग्य को लागी सम्मान, सम्मानजनक को लागी सम्मान, विश्वसनीय को लागी वफादारी।
उपासनाको पाँच सिद्धान्त
भजन ३३: १-३ मा हामी पढ्छौं: "प्रभुमा रमाउनुहोस्, हे धर्मी; सीधा उहाँको प्रशंसा गरौं। वीणा बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँको स्तुति गाओ दस तारहरु को भजन मा। उहाँलाई नयाँ गीत गाउनुहोस्; खुसीको आवाज संग तार मा राम्रो संग खेल्छ! " धर्मशास्त्रले हामीलाई प्रभुको लागी एउटा नयाँ गीत गाउन, खुशीको लागी जयजयकार गर्न, वीणा, बाँसुरी, खम्बा, तुरही, र झ्याल को उपयोग गर्न को लागी निर्देश गर्दछ - भजन 33,1-3)। छवि उत्साह को छ, uninhibited आनन्द को, खुशी को कि बाधा बिना व्यक्त गरीन्छ।
बाइबलले हामीलाई सहज उपासनाको उदाहरण दिन्छ। यसले हामीलाई औपचारिक विधिवत पूजाका उदाहरणहरू पनि प्रदान गर्दछ, रूढीपूर्ण कार्यहरूसँग जुन शताब्दीयौंदेखि त्यस्तै छ। दुबै प्रकारका आराधनाहरूलाई उचित ठहराउन सकिन्छ, र न त केवल परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने एक मात्र प्रामाणिक तरीका हो भनेर दावी गर्न सक्दछ। म पूजासँग सम्बन्धित केहि सामान्य सिद्धान्तहरु दोहोर्याउन चाहन्छु।
१. हामीलाई पूजा गर्न भनिएको छ
सबैभन्दा पहिले, भगवान हामी उहाँको उपासना गर्न चाहन्छौं। यो एक निरन्तर हो कि हामी धर्मशास्त्र को शुरू देखि अन्त्य सम्म देख्छौं (उत्पत्ति ४: ४; यूहन्ना ४:२३; प्रकाश २२:))। उपासना एउटा कारण हो कि हामीलाई उहाँको गौरवशाली कार्यहरु घोषणा गर्न बोलाइएको थियो (१ पत्रुस २:))। न केवल परमेश्वरका मानिसहरु उहाँलाई माया गर्छन् र उहाँको आज्ञा पालन गर्छन्, तर उनीहरु पनि पूजा को विशिष्ट कार्यहरु अभ्यास गर्छन्। उनीहरु बलिदान गर्छन्, उनीहरु स्तुतिगान गाउँछन्, उनीहरु प्रार्थना गर्छन्।
धर्मशास्त्रमा हामी विभिन्न प्रकारका आराधना देख्छौं। धेरै विवरणहरू मोशाको व्यवस्थामा लेखिएको थियो। निश्चित स्थानहरूमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई केही खास कार्यहरू दिइन्थ्यो। को हो, के, कहिले, कहाँ र कसरी विस्तृत रूपमा निर्दिष्ट गरिएको थियो। यसको विपरीत, उत्पत्ति १ मा हामी कुलपिताहरूले कसरी पूजा गर्ने भन्ने बारेमा थोरै नियमहरू देख्छौं। उनीहरूको कुनै नियुक्त पुजारीको दल थिएन, कुनै खास ठाउँमा सीमित थिएन, र के बलिदान गर्ने र कहिले बलिदान दिने भनेर थोरै मात्र बताइएको थियो।
फेरि नयाँ नियममा हामी कहिले र कहिले पूजा गर्ने भन्ने बारेमा थोरै देख्छौं। आराधनाको कार्यहरू कुनै विशेष समूह वा स्थानमा सीमित थिएन। ख्रीष्टले मोजेक आवश्यकता र सीमितताहरू समाप्त गर्नुभयो। सबै विश्वासीहरू पूजाहारीहरू हुन् र आफूलाई निरन्तर जीवित बलिहरूको रूपमा दिन्छन्।
२. केवल भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ
विभिन्न शैलीका आराधना गर्ने शैलीको बाबजुद पनि धर्मशास्त्रको सबै अंशहरू एक जना निरन्तर चलिरहन्छन्: केवल ईश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। यदि यो स्वीकार्य हो भने पूजा विशेष हुनुपर्दछ। परमेश्वर हाम्रो प्रेमको, हाम्रो सबै वफादारीको माग गर्नुहुन्छ। हामी दुई देवताहरूको सेवा गर्न सक्दैनौं। यद्यपि हामीले उहाँलाई विभिन्न तरिकाले पूजा गर्न सक्दछौं, हाम्रो एकता यस तथ्यमा आधारित छ कि हामी उहाँकै पूजा गर्छौं।
पुरातन इजरायलमा प्रतिद्वन्द्वी देव अक्सर बाल नै हुन्थ्यो। येशूको समयमा यो धार्मिक परम्परा, आत्म-धार्मिकता र कपटी थियो। वास्तवमा, हामी र ईश्वरको बीचमा आउने सबै कुरा - हामीलाई उहाँको आज्ञा पालन नगर्ने सबै कुरा - एक झूटा देवता, एक मूर्ति हो। आज केहि मानिसहरुका लागि यो पैसा हो। अरूहरूका लागि यो यौन हो। कसैसँग गर्वका साथ ठूलो समस्या हुन्छ वा अन्य व्यक्तिले उनीहरूको बारेमा के सोच्न सक्छन् भनेर चिन्ता गर्दछ। जोनले केहि सामान्य झूटा देवताहरूको उल्लेख गर्दछन्:
Love संसार वा संसारमा के छ माया नगर्नुहोस्। यदि कसैले संसारलाई माया गर्छ भने उसमा बाबाको माया छैन। संसारमा भएका सबै थोकको लागि, मासुको लालसा र आँखाको अभिलाषा र अहंकारी जीवन, पिताबाट होइन, तर संसारबाट हो। र संसार यसको वासना संग बित्छ; तर जो परमेश्वरको इच्छा गर्दछ ऊ सधैं को लागी रहन्छ »(१ यूहन्ना २: १५-१1)।
हाम्रो कमजोरी के हो भन्ने कुराले फरक पार्दैन, हामीले त्यसलाई क्रूसमा टाँग्नु पर्छ, त्यसलाई मार्नु पर्छ, हामीले सबै झूटा देवताहरूलाई हटाउनु पर्छ। यदि कुनै कुराले हामीलाई परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न रोक्छ भने, हामी यसलाई हटाउनु पर्छ। परमेश्वर मानिसहरू एक्लै उहाँको उपासना गरेको चाहनुहुन्छ।
तेस्रो निरन्तर उपासना को बारे मा हामी धर्मशास्त्र मा देख्छौं कि पूजा ईमान्दार हुनुपर्छ। त्यहाँ फारम को लागी केहि गर्न को लागी कुनै उपयोग छैन, सहि गीत गाउने, सही दिनहरुमा एक साथ भेला हुन, सही शब्द भन्दैमा यदि हामी हाम्रो दिल मा भगवान लाई माया गर्दैनौं। येशूले ती मानिसहरुको आलोचना गर्नुभयो जसले आफ्नो ओठले भगवानको सम्मान गरे तर उहाँको व्यर्थमा पूजा गरे किनकि उनीहरुको मुटु ईश्वरको नजिक थिएन। तिनीहरुको परम्पराहरु (मूल रूप बाट आफ्नो प्रेम र पूजा व्यक्त गर्न को लागी डिजाइन गरीएको थियो) वास्तविक प्रेम र पूजा को लागी बाधाहरु बनेको थियो।
येशूले धार्मिकताको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो जब उहाँ भन्नुहुन्छ कि हामीले आत्मा र सत्यतामा उहाँको पूजा गर्नुपर्छ (यूहन्ना ४:२४)। जब हामी भन्छौं कि हामी भगवानलाई माया गर्छौं तर उहाँको निर्देशन मा साँच्चै क्रोधित छौं, हामी कपटी हौं। यदि हामी उहाँको अधिकार भन्दा माथि हाम्रो स्वतन्त्रताको कदर गर्छौं, हामी साँच्चै उहाँको पूजा गर्न सक्दैनौं। हामी उहाँको वाचा हाम्रो मुखमा लिन सक्दैनौं र उहाँको वचन हाम्रो पछि फ्याँक्न सक्दैनौं (भजनसंग्रह ५०: १-4,24-१50,16)। हामी उहाँलाई प्रभु भन्न सक्दैनौं र उहाँ के भन्नुहुन्छ बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न।
धर्मशास्त्र भरि, हामी हेर्दछौं कि साँचो उपासनामा आज्ञाकारिता पनि समावेश हुनुपर्दछ। यस आज्ञाकारितामा हामीले एक अर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने बारेमा परमेश्वरको शब्दहरू समावेश भएको हुनुपर्दछ।
यदि हामी उहाँका छोराछोरीको सम्मान गर्दैनौं भने हामी भगवानको सम्मान गर्न सक्दैनौं। Someone यदि कसैले भन्छ: म भगवानलाई माया गर्छु र उसको भाइलाई घृणा गर्छु, ऊ झुटो हो। किनकि जसले आफ्नो भाइलाई माया गर्दैन जसलाई उसले देख्दछ, उसले भगवानलाई कसरी माया गर्न सक्छ जसलाई उसले देख्दैन? " (१ यूहन्ना ४: २०-२१)। यसले मलाई यशैयाको निर्दयी आलोचना को सम्झना गराउँछ जो सामाजिक अन्याय को अभ्यास गर्दा पूजा अनुष्ठान गर्दछन्:
Your तपाइँ आफ्नो शिकार को भीड बाट के मतलब छ? प्रभु भन्नुहुन्छ। मँ भेडाको होमबलि र मोटो बाछाको बोसोले भरिएको छु, र म साँढे, भेडा र बाख्रा को रगत मा कुनै खुशी छैन। यदि तपाइँ मेरो सामुन्ने उपस्थित हुन आउनुहुन्छ, कसले तपाइँलाई मेरो अदालतमा कदम उठाउन सोध्नेछ? अब कुनै यस्तो व्यर्थ भोजन प्रसाद बनाउन! म धूप घृणा गर्छु! नयाँ चन्द्रमाहरु र विश्राम दिनहरु, जब तपाइँ एक साथ आउनुहुन्छ, मलाई पवित्र र उत्सव भेला मन पर्दैन! मेरो आत्मा तपाइँको नयाँ चन्द्रमाहरु र वार्षिक उत्सवहरु को लागी शत्रुतापूर्ण छ; उनीहरु मेरो लागी बोझ हुन्, म उनीहरुलाई बोक्न थाकेको छु। र यदि तपाइँ आफ्नो हात फैलाउनुहुन्छ, मँ मेरो आँखा तिमी बाट लुकाउनेछु; र यदि तपाइँ धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मँ अझै पनी तिमीलाई सुन्दैन; किनकि तिम्रो हात रगतले भरिएको छ (यशैया १: ११-१५)।
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, ती मानिसहरू पक्राउ परेको गुनासोहरू त्यहाँ केही थिएन, धूपको प्रकार, वा जनावरहरूले बलि चढाए। समस्या तिनीहरू बाँकी समय बाँच्ने तरिका थियो। "तपाईका हात रगतले ढाकिएका छन्," उनले भने - र मलाई पक्का विश्वास छ कि यो समस्या वास्तवमा हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको होईन।
उहाँले एक व्यापक समाधान को लागी आह्वान गर्नुभयो: "नराम्रो गर्न दिनुहोस्, राम्रो गर्न सिक्नुहोस्, न्याय खोज्नुहोस्, उत्पीडितहरुलाई मद्दत गर्नुहोस्, अनाथहरुलाई न्याय दिनुहोस्, विधवाहरुको कारणको नेतृत्व गर्नुहोस्!" (Vv। 16-17)। तिनीहरूले आफ्नो पारस्परिक सम्बन्ध क्रम मा राख्नु परेको थियो। उनीहरुले जातीय पूर्वाग्रह, सामाजिक वर्गहरु र अनुचित आर्थिक अभ्यासहरु को बारे मा रूढीवादीहरु लाई समाप्त गर्न को लागी थियो।
All. सबै जीवन
उपासना, यदि यो वास्तविक हो भने, हप्ताको सात दिन हामीले एक अर्कालाई व्यवहार गर्ने तरिकामा भिन्नता ल्याउनुपर्दछ। यो धर्मशास्त्रको अर्को सिद्धान्त हो जुन हामी धर्मशास्त्रमा देख्छौं।
हामीले कसरी पूजा गर्ने? मीकाले यो प्रश्न सोधे र जवाफ दिन्छ:
«म कसरी प्रभु को नजिक हुन, उच्च भगवान को सामु झुक्नु पर्छ? के म उसलाई होमबलि र एक बर्षे बाछो संग भेट्न सक्छु? के प्रभु धेरै हजार भेडाहरु मा, तेल को असंख्य नदीहरुमा खुशी लिनुहुन्छ? के म मेरो अपराध को लागी मेरो जेठो छोरो, मेरो पाप को लागी मेरो शरीर को फल दिनु पर्छ? तिमीलाई भनिएको छ, यार, के राम्रो छ र प्रभु के तपाइँ बाट सोध्नुहुन्छ, अर्थात् भगवान को वचन राख्न र प्रेम को अभ्यास र आफ्नो भगवान को सामु विनम्र हुन "(मी 6,6: 8)।
होशेले यो पनि जोड दिए कि मानव सम्बन्ध पूजा को मेकानिक्स भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ। "किनकि म मायाको आनन्द लिन्छु बलिदान होइन, भगवानको ज्ञान हो र होमबलि होइन।" हामी केवल प्रशंसा गर्न को लागी होइन तर असल कामहरु को लागी बोलाइएको छ (एफिसी २:१०)।
हाम्रो उपासनाको अवधारणा स music्गीत र दिन भन्दा पर जानै पर्छ। यी विवरणहरू हाम्रो जीवनशैली जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैन। भाइहरूको बिचमा बिउ छरेर शबाथ पालन गर्नु कपटी छ। केवल भजनहरू मात्र गाउनु र तिनीहरूको वर्णन गर्ने तरिकामा उपासना गर्न इन्कार गर्नु कपटी हो। नम्रताको एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवतारको उत्सवको गर्व गर्न पाउनु कपटी हो। यदि हामी उहाँको धार्मिकता र दया खोज्दैनौं भने येशू प्रभुलाई कल गर्नु कपटी छ।
उपासना केवल बाह्य कार्यहरू मात्र होइन - यसले हाम्रो व्यवहारमा पूर्ण परिवर्तन समावेश गर्दछ जुन हृदयमा पूर्ण परिवर्तनको परिणामस्वरूप हुन्छ, यो परिवर्तन हामीमा पवित्र आत्माले ल्याएको हो। यो परिवर्तन ल्याउन, हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना, अध्ययन र अन्य आध्यात्मिक विषयहरूमा समय दिन हाम्रो इच्छुकता चाहिन्छ। यो परिवर्तन जादु शब्द वा जादु पानी द्वारा हुँदैन, यो भगवान संग कुराकानी मा समय खर्च गरेर हुन्छ।
आराधनाप्रति पावलको विस्तारित दृष्टिकोण
पूजा हाम्रो जीवन को सबै समेटेको छ। हामी यो विशेष गरी पावलको शब्दहरुमा देख्छौं। पावलले बलिदान र पूजा (उपासना) को शब्दावली निम्नानुसार प्रयोग गरे: now मँ, प्रिय भाइहरु, अब तिमीहरुलाई भगवानको दया को माध्यम बाट बिन्ती गर्दछु कि तिम्रो शरीर लाई बलिदान को रूप मा बलिदान, पवित्र र भगवान लाई मनपर्ने छ। यो तपाइँको उचित उपासना होस् "(रोमी १२: १)। सम्पूर्ण जीवन पूजा हुनु पर्छ, हरेक हप्ता केहि घण्टा मात्र होइन। निस्सन्देह, यदि हाम्रो जीवन उपासना को लागी समर्पित छ, यो पनी पनी पनी पनी अन्य ईसाईहरु संग केहि घण्टा हरेक हप्ता समावेश गर्न को लागी!
रोमी १ 15,16:१ मा पावलले बलिदान र पूजाका लागि अरू शब्दहरू प्रयोग गर्दछन् जब उनले "परमेश्वरले उनलाई दिनुभएको अनुग्रहको कुरा गर्छन्" ताकि म अन्यजातिहरूमाझ येशू ख्रीष्टको सेवक बन्न सकूँ, पूजाहारीको रूपमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न सक ताकि अन्यजातिहरूले पवित्र आत्माद्वारा पवित्र गरिएको, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने शिकार बन्नुहोस्। यहाँ हामी देख्छौं कि सुसमाचार प्रचार गर्ने तरिका उपासनाको एक प्रकार हो।
चूंकि हामी सबै पुजारी हौं, हामी सबै को पुजारीको काम छ जसले हामीलाई बोलाएकाहरु को आशीर्वाद को घोषणा (१ पत्रुस २:)) - एक सेवा हो कि प्रत्येक सदस्य उपस्थित हुन सक्छन्, वा कम से कम अरु संग कुराकानी गरेर भाग लिन मद्दत गर्न सक्छ। सुसमाचार।
जब पावलले फिलिपिन्सलाई आर्थिक सहयोग पठाउनुभएकोमा धन्यवाद दिए, उनले उपासनाको लागी शब्दहरु प्रयोग गरे: "मैले इपाफ्रोडिटस बाट तिमीबाट जे पाएको छु: एक सुन्दर गन्ध, एक सुखद बलिदान, भगवानलाई खुशी पार्ने" (फिलिप्पी ४:१))।
वित्तीय सहायता जुन हामी अन्य ईसाईहरुलाई दिन्छौं पूजा को एक रूप हुन सक्छ। हिब्रू १३ ले आराधना को वर्णन गर्दछ जुन शब्दहरु र कामहरु मा हुन्छ: "तेसैले हामी सधैं उहाँ को माध्यम बाट भगवान को प्रशंसा गरौं, जो उसको नाम बोल्ने ओठ को फल हो। राम्रो गर्न र अरु संग साझा गर्न नबिर्सनुहोस्; यस्तो बलिदान भगवान को लागी खुशी छन् "(पद १५-१13)।
यदि हामी उपासनालाई जीवनको एक तरीकाको रूपमा बुझ्छौं जसमा दैनिक आज्ञाकारिता, प्रार्थना र अध्ययन समावेश छ, मलाई लाग्छ कि हामीसंग संगीत र दिनहरूको प्रश्न हेर्दा हामीसँग अझ राम्रो परिप्रेक्ष्य हुन्छ। यद्यपि स worship्गीत आराधनाको महत्त्वपूर्ण अंश भएको छ, तर कम्तिमा डेभिडको समयदेखि नै संगीत आराधनाको महत्त्वपूर्ण अंश होइन।
त्यस्तै गरी, पुरानो नियमले पनि बुझ्दछ कि उपासनाको दिन त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन जति हामी अर्कोलाई व्यवहार गर्दछौं। नयाँ करारमा उपासनाको लागि कुनै खास दिनको आवश्यकता पर्दैन, तर यसले एक अर्कालाई प्रेमको व्यावहारिक कार्यहरूको आवश्यकता पर्दछ। हामी माग गर्छौं कि हामीले जम्मा गर्नु पर्छ, तर हामीले कहिले भेला गर्ने हो त उहाँ हुकुम गर्नुहुन्न।
मित्रहरु, हामीलाई परमेश्वरको पूजा गर्न, मनाउन, र परमेश्वरको महिमा गर्न बोलाइएको छ। उहाँले हाम्रो लागि र हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट मार्फत गर्नुभएका कुराहरूको साथ सुसमाचार बाँड्न, उहाँका फाइदाहरू घोषणा गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं।